Izikhathi eziningi abantu unokukhathazeka mayelana nohlobo amavukuzi yabo. Phela, owazi, mhlawumbe ezinsukwini ezimbalwa sizoqala sikhule. Futhi lokhu uphawu melanoma kungenzeka noma yimuphi omunye umdlavuza wesikhumba oyingozi. Futhi wenzani esimweni lapho udinga okuthile ukuxazulula? Ngokwemvelo, endaweni nenqubo efana dermoscopy. Kuyini lokhu inhlolovo? Kungakanani kuzobiza? Ingabe kukhona Izimo? Ake siphenye.
Kuyini lokhu inhlolovo?
Manje yisikhathi ukufunda konke mayelana kokutshelwa ngokukhubazeka kwengane njengoba dermoscopy. Kuyini lokhu? Lokhu ukuhlola Izilonda ngoba umdlavuza usebenzisa ithuluzi ekhethekile enegama ezifanele - dermatoscope. Lolu cwaningo eyenziwa kakhulu ukumane. Kuthatha imizuzu embalwa - futhi udokotela uzokwazi cabanga ngemininingwane isakhiwo kanye nezinye izici imfundo ezingabazisayo. luhlolo kahle kakhulu kuyinto dermoscopy. Intengo liphinde mncane impela - isilinganiso ruble 1,000. Konke kuncike emtholampilo ethile.
Kwezinye izimo, kuyadingeka?
isikhumba dermoscopy kuyinto luhlolo kubaluleke kakhulu uma:
Kukhona amavukuzi entsha. Iqiniso lokuthi kungaba engase Ukudlulela. Ngokwemvelo, cha phuzu. Baningi impela abantu nokhunye okuthuthwa eziningi amavukuzi. Futhi yini nabo kungenzeki. Kodwa noma kunjalo, uma ucabanga ukuthi konke okungalungile - kuba isizathu ukufuna usizo lodokotela ngokushesha. Ngenxa umdlavuza kuyingozi kakhulu futhi kunzima ukuyelapha. Kungcono hhayi ukuba engozini futhi bahlola ngesikhathi kamuva akudingeki ukuchitha imali eningi ekwelashweni an eqolo futhi yesikhathi eside.
imvukuzane Old waqala ukwandisa ngokushesha ubukhulu noma ukuthola isakhiwo okungezona iyunifomu. Akukhona njalo a umkhangu ezivamile uhlala phakathi nakho konke ukuphila. Kungenzeka nezinye izenzakalo ezingajabulisi. Bese esiqintini umzimba iba isitha sethu. Stupid ngokwanele, mangisho. Phela, kuvela ukuthi ngokubulala kithi, ikwenze yena. Kodwa thina akudingeki lezi nezingathekiso. Vele uma ubona ushintsho ukuma, umbala noma usayizi imvukuzane - kuwuphawu olubi.
Emkhakheni amavukuzi muva uvele ukulunywa, ubuhlungu kanye nezinye emizweni ezingezinhle. Umdlavuza hhayi ngaso sonke isikhathi sihambisana emizweni ezibuhlungu. Kungaba umbulali obulala buthule. Kodwa uma imvukuzane kubuhlungu, ke ngempela isizathu zidlule le nqubo. Better uphephe kunokuzisola kamuva.
Uma imvukuzane iye abahlukumezekile. Isikhathi esining impela kwenzeka ukuthi uma kulimaza imvukuzane, uqala ukukhiqiza omningi zamangqamuzana omdlavuza. Awudingi ukuba izifake engozini, futhi ngokushesha ukuya kudokotela ukucacisa isimo emva ukulimala. Kulokhu, isikhathi akemi ukulahlekelwa.
Une emzimbeni zikhona njalo amavukuzi entsha, nakuba inani layo lidlula 50.
Uma ufuna ukususa umkhangu. Ngaphambi kokuba unqume ukukhipha imvukuzane ugly, kufanele ucabangele. Mhlawumbe ukususwa emzimbeni bazosungula mshini umsuka izimila ebulalayo. Ukuze ugweme lokhu, ungaya dermatoscopy. Ukulahlwa yalemitimba odokotela kuphela abathintekayo.
Uma okungenani eyodwa amaphuzu idatha ukhathazekile ukuthi dermoscopy amavukuzi kufanele kwenziwe saziso. Lapho ukuthi lolu hlolo silula.
Ingabe kukhona Izimo?
Azikho Izimo kule akukho ucwaningo. Lokhu okunye ugcizelela ubulula bayo kahle. Akuvamile ungathola ucwaningo ukuthi kungaba efanelekayo esigulini ngasinye. Kodwa ngempela akukho contraindication e potsedury ezifana dermoscopy. Okungukuthi, siye sacabangela ngenhla. Ukuba yizinhlobonhlobo kunemidanti lokufaneleka ethile endabeni amavukuzi, ngaleso umthelela okungenani engakhi kungaba zibe ebulalayo.
Inqubo ikhomishana inhlolovo
Ukuthi Udokotela udinga ukwenza ukuze izimila dermoscopy wawenziwa? Yini okudingeka uyenze? Yiziphi izenzo amaKristu okufanele athathwe? Inqubo lolucwaningo sisobala:
Nge isiguli utshela udokotela futhi interrogates kuye ngoba izimpawu kanye nezikhalo, isikhathi nesenzakalo yabo, njalo njalo. Lesi sinyathelo kuyadingeka ngoba hypothesizing Mayelana izifo. Futhi, ucwaningo kakhulu obulandela luhlolo ngokushesha wezokwelapha amavukuzi.
Ngemva kwalokho imvukuzane udokotela usimende noma elinye ibhizinisi esikhumbeni ne ijeli ekhethekile noma amafutha. Inhloso yalesi senzo silula - ukuvimbela ibonisa ukukhanya umkhangu ebusweni.
wesikhumba Landelayo kuthatha kudivayisi elikhethekile okuthiwa i dermatoscope. Empeleni ngesibonakhulu encane, okuyinto ungaxhuma ikhamera. Ngokusebenzisa dermatoscope ingabonwa imvukuzane uqobo, futhi ikhamera ikuvumela ukuthatha izithombe ukuwabuka kukhompyutha nokwanda okwengeziwe.
Empeleni, lokhu kwenza udokotela emva isithombe sathathwa. Eliqinisekisiwe ngu lenqwaba izinkomba: isakhiwo imvukuzane, umbala, ukufana ukusatshalaliswa esikhumbeni, bushelelezi yakhe noma cha onqenqemeni. Yilokho kanye wenziwa dermoscopy. Yini eyenza? Ukunemba ukuzimisela Oncology phakathi lezo zinqubo - 96%.
It ngempela kuyinto sibalo Amazing. Alukho uphenyo nezinye ilula kangaka futhi ngempumelelo hhayi. Konke lokhu kwenza enhle kakhulu biopsy dermatoscopy esikhundleni, okubandakanya amaseli kocingo amavukuzi ahlolwe. Kwakungelona nje kuyingozi ngokwanele (imvukuzane abalimala), kodwa futhi kubuhlungu. Kodwa manje isisezweni kakade esikhathini esidlule.
Kuyini izindlela ezintsha?
Le ndlela ngokwawo ezintsha. Futhi kukhona lenqwaba izizathu. Esokuqala siwukuthi yokuthi isibonakhulu ephathekayo ephethe ilambu ekhethekile - lena emisha. Ngaphezu kwalokho, le ndlela inikeza ukunemba eliphakeme kalula kakhulu kokusebenza, okuyinto waphinda kuqinisekisa mqondo "Zonke brilliant -. Lula"
Thina esiphethweni sokuthi dermoscopy okungukuthi, izimo lapho ucwaningo kumele kusetshenziswe, futhi adiliza inqubo ngokwalo eliyifa layo. Manje awudingi ukuba wesabe ngaphambi uya kudokotela. Phela, akukaze vakashela wayengekho ukhululekile ngakho futhi iphephile.
Xiaomi redmi 1S: Ukucaciswa, ukubuyekezwa, imiyalelo, firmware
Uyini ukuhambisana Cancer futhi Sagittarius?